an-trano > Tapakila fiaran-dalamby Eurostar mora sy vidiny fitsangatsanganana
Eto ianao no afaka mahita ny fampahalalana rehetra momba Tapakila fiaran-dalamby Eurostar SY Vidin'ny fitsangatsanganana Eurostar ary tombony.
Ny lalamby haingam-pandeha Eurostar dia serivisy izay mampifandray an'i Eoropa Andrefana mankany London sy Kent any Angletera, Ny fifandraisana avy any Eropa dia i Paris sy Lille any Frantsa, Bruxelles, ary Antwerp any Belzika, Rotterdam sy Amsterdam any Holandy. ihany koa, afaka mandeha amin'ny lamasinina ianao mankany London mankany Disneyland Paris (Fiaran-dalamby fitsangantsanganana marne La Vallee) ary koa fivezivezena tany Frantsa toa an'i Marseilles sy Moutiers ao amin'ny Alpes frantsay. Ny fiaran-dalamby rehetra Eurostar dia miampita ny Channel English amin'ny alàlan'ny Channel Tunnel.
ny Serivisy fiaramanidina Eurostar lamasinina ireo dia mandeha 320 km adiny iray amin'ny zotra hafainganam-pandeha haingam-pandeha. Hatramin'ny nanomboka niasa tao Eurostar 1994, misy tsipika vaovao natsangana any Belzika sy Angletera hampihenana ny fotoana fitsangatsanganana eo anelanelan'ny toeran'i Eurostar. Ny tetikasa Channel Tunnel Rail Link misy dingana roa dia vita tamin'ny 14 Novambra 2007, rehefa nafindra tao amin'ny Waterloo International ny toby London any Eurostar London St Pancras International fiantsonan'ny fiaran-dalamby.
isa 1: Soraty mialoha araka izay vitanao ny tapakilan'ny Eurostar
isa 2: Travel by Eurostar in fe-potoana mahomby
isa 3: Alefaso ny tapakilan'ny Eurostar rehefa azonao antoka ny fandaharam-potoananao
isa 4: Vidio ny tapakila Eurostar anao amin'ny Save A Train
Malagasy 35 € – 190 € 68 € – 380 €
1) Ny tombony amin'ny fitsangatsanganana Eurostar dia ny handehananao sy tonga mivantana any afovoan-tanàna amin'ny tanàna rehetra izay ihananao, ity dia zavatra tsy manam-paharoa amin'ny fiaran-dalamby, ka raha manofana fitsangatsanganana avy any Paris ianao, Bruxelles, Amsterdam, Rotterdam, Antwerp, Lille na London dia tombony lehibe ho an'ny Eurostar io. Raha ny amin'ny Ny vidin'ny Eurostar, matetika izy io. Ny fampiroboroboana sasany dia ahafahanao mahazo tapakila mora vidy Eurostar. Saingy mandritra ny andro farany alohan'ny hiaingany, mitombo ny vidiny. Raha tianao ny làlana tsara, Eurostar ho anao!
2) Ny fitsangatsanganana fiaramanidina dia misy ny filaminan'ny fiarovana fiaramanidina, ary izany dia tsy maintsy manana, fara fahakeliny 2 ora alohan'ny hialanao amin'ny fotoana voatondro, miaraka amin'i Eurostar mila manao ny marina ianao 1 mialoha ny fotoana. ihany koa, mila miverina eny amin'ny seranam-piaramanidina avy ao afovoan-tanàna ianao. Ka raha toa ka manisa ny ora dia, Eurostar dia mandresy hatrany amin'ny ora fitsangatsanganana rehetra.
4) Ny fiaramanidina dia iray amin'ireo antony mahatonga ny fandotoana ny planeta ambony indrindra, eo amin'ny ambaratonga fampitahana, lamasinina dia be namana kokoa, ary raha ampitahaininao ny fiaramanidina amin'ny lamasinina, Ny fitsangatsanganana fiaran-dalamby dia 20x latsaka ambany indrindra noho ny valan-javaboary amin'ny fiaramanidina.
Ny lalamby Eurostar dia manana serivisy kilasy marobe izay hatsangana ho an'ny teti-bola rehetra, sy ny karazana fitsangatsanganana rehetra, na mpanao dia lavitra ianao na miala voly na izy roa 🙂
ny Tapakila Eurostar Standard no mora indrindra amin'ny dia lafo rehetra. Tsara indrindra raha hamaky mialoha io tapakilan'ny lamasinina io mialoha, noho ny tapakila tapakila ambany – amidy haingana izy ireo. Ny fitsangatsanganana fitazomana tapakila mahazatra dia afaka mandray 2 valizy + 1 kitapo mitondra entana maimaim-poana. Ireo mpandeha amin'ny tapakila mahazatra Eurostar dia afaka mankafy WiFi sy fisafidianana seza ihany koa. Ny tapakila fenitra dia tsy voatery averina.
Ny kilasy tapakila ity dia lafo be noho ny karazana tapakila mahazatra Eurostar, ny Tapakila Premier Standard dia manolotra serivisy fanampiny. Ho fanampin'ny tombontsoa amin'ny tapakila Standard izay nosoratanay etsy ambony, Ny tapakila Premier Standard dia manome seza tsara kokoa miaraka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny bebe kokoa, safidy be dia be ny gazety sy gazety dia omena maimaim-poana, ary mihinana sakafo maivana sy zava-pisotro maivana eo amin'ny sezanao eny ambonin'ny sambo Eurostar. Ny tapakila Premier Standard dia azo ovaina arakaraka ny alehanao.
ny Tapakila Premier Eurostar Business ny mpividy dia afaka mahazo ny tombony rehetra nosoratanay etsy ambony, hahazo tombony amin'ny mpandeha ny Eurostar Business Premier 3 kitapo harona fa tsy 2, menu mafana mahavariana namboarin'ny chef malaza Raymond Blanc, Ny mpandeha amin'ny Premier Premier dia afaka mankafy fitsangatsanganana alohan'ny hidirany amin'ny fiaran-dalamby mankany an-dàlana mankany London na avy any London, Fanampin'izany dia fisavana manokana iray ihany 10 minitra sy serivisy famandrihana taxi iray ho azy ireo fotsiny. tena zava-dehibe, ity karazana tapakila Eurostar Business Premier Train ity dia ahafahan'ny fivezivezena amin'ny dia mora: afaka manova sy manafoana ny dia, alohan'ny hialanao na hiakatra 60 andro taorian'ny nandehananao, rehetra tsy misy vidiny fanampiny.
tsy misy, sy ny mifanohitra amin'izay koa, Eurostar ihany no tohanan'ireo tapakila teboka ary tsy tohanan'ny pasipaoro rehetra, fa raha mandeha lavitra amin'ny Eurostar ianao dia afaka miditra ao amin'ny Eurostar Club, ity dia fandaharan'asa tsy fivadihana izay manolotra anao hanangona ireo làlan-dalamben'ny lamasinina mba hahafahanao manavotra ireo teboka ireo amin'ny tapakila na fihenam-bidy. Mahazo vola ianao 1 tondro isaky ny £ 1 izay laninao ary ireo isa ireo dia manome anao tombontsoa manokana:
– Raha mahazo ianao 500 hevitra: afaka mahazo ianao 1 manavao ny serivisy.
ny Brussels Midi-Zuid (Brussels Atsimo) hita eo afovoany ao Brussels, fa hamarino tsara fa mila ianao Brussels Midi-Zuid ary tsy ny Station Brussels Central, Fiaran-dalamby ao Brussels Midi-Zuid 22 lamasinina sehatra, ary ny biraon'ny tapakilan'ny Eurostar dia miorina akaikin'ny lampihazo 8. Ny tapakilan'ny fiaran-dalamby Eurostar dia ahafahanao mandeha malalaka eo anelanelan'ny Brussels Midi Zuid sy Brussels Central.
Amsterdam Central (Amsterdam Central Station) no misy ao afovoan-tanànan'i Amsterdam eo akaikin'ny renirano, rehefa miala amin'ny gara ianao, hitanao ny Amsterdam Main Street feno fisarihana toa an'i Madame Tussauds fa tsy avy any koa ny distrikan'ny jiro mena. Toy ny any amin'ny gara be maro any Eropa, manana depot amin'ny entana ianao izay misokatra aloha ary mifarana raha tsy te hotsidihina fotsiny ianao 1 andro na alohan'ny ahafahanao miditra ao amin'ny hotely aza.
Station Central Antwerp dia eo amin'ny toerana itondranao an'i Eurostar any Antwerp tanàna faharoa lehibe indrindra any Belzika, Raha mandeha amin'ny Antwerp ianao, Manoro hevitra izahay fa tena tonga any amin'ny gara ianao raha vao ela kokoa noho ny voalaza 1 ora alohan'ny handehanana satria izao nahazo ny loka ho an'ny haingo ny gara ary ny maritrano ary manana izany 5 gorodona sy ny tsara tarehy hialana ao.
Ny orinasa izay manana Eurostar, dia tsy mahagaga raha Eurostar International Limited, 55% fananan'ny SNCF, 30% CDPQ Kanada, 10% Federated Hermes sy ny ambiny dia an'ny lalamby Belzika, SNCB.
Ankoatra an'i Paris, LONDRES, Amsterdam sy Brussels, Rotterdam, sy Lille, Eurostar dia miasa koa ny tsipika amin'ny vanim-potoana. Mandritra ny vanin-taona mafana, teo anelanelan'ny Jolay sy septambra, fiaran-dalamby Eurostar mandeha mivantana any Avignon sy Marseilles, raha mandritra ny volana ririnina, teo anelanelan'ny Desambra sy aprily, Ny lalamby Eurostar dia afaka mandeha mivantana any amin'ny faritra filomanosana any Alps toa an'i Moutiers na Bourg St Maurice izay tanàna lehibe tokony hankanesana any amin'ireo Ski trano toa an'i La Plange, Misafidy ireo, Tignes sy Val Thorens.
Misy toerana iray amin'ny fiaran-dalamby Eurostar izay manokan-tena amin'ny fisotroana sy ny sakafo maivana ao amin'ny Eurostar, Ahitana ny sandwich ny menu, sôkôla sôkôla, tsakitsaky, sôkôla sôkôla, kafe, sôkô mafana na dite. Afaka mihinana sy misotro amin'ireto fiaran-dalamby ity ianao na haka izay novidinao tamin'ny seza. Azonao atao ny mampiasa lozisialy mandeha eo akaikin'ny sezanao amin'ny lamasinina Eurostar.
Te hampidirina amn'ny tranokalanao ity pejy ity? kitiho eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-eurostar%2F%0A%3Flang%3Dmg – (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code), Na azonao atao rohy mivantana ao amin'ity pejy ity.